'Weerara hoomaa awwaannisaa Itoophiyaa mudateen Oromiyaatu caalaa miidhama' - BBC News Afaan Oromoo
'Weerara hoomaa awwaannisaa Itoophiyaa mudateen Oromiyaatu caalaa miidhama'
Image copyright Light rocket
Goodayyaa suuraa Awwaannisa affeelaman
Oromiyaan naannolee sodaan weerara hoomaa awwaanisaa itti hammaate keessaa tokko jedhan Ministeera Qonnaatti daarektarri eegumsa biqilootaa Obbo Zabdewos Saalaatoo BBC'tti yeroo dubbatan.
"Hoomaa awwaanisaa 180 ol ofirraa ittisne. Hoomaan awwaanisaa tokko bal'ina hanga magaala Finfinnee gahu qaba," jedhan.
Obbo Zabdewos Saalaato BBC'tti akka dubbataniitti, Itoophiyaan erga ji'a Waxabajjii bara 2011 as weerara hoomaa awwaanisaa irraa bayyanachuu hin dandeenye.
Naannoleen biyyattii harki caalmaan weerara hoomaa awwaanisaa keessummeessaniiru. Naannoleen kunnen Affaar, Tigraay, Amaaraa, Somaalee, Oromiyaa fi Naannoo Saba, Sablammoota fi Uummatoota Kibbaati.
"Biyyoonni akka Yaman fi Somaaliyaa hoomaa awwaannisaa isaan weeraru ittisuu irratti hojjechuu dhiisuu isaanitin, hoomaan awwaanisaa akka fedhetti guddatee, bilisummaan jiraatee gara keenya dhufa," jedhan Obbo Zabdewos.
Kun immoo hammeentaan hoomaa awwaanisaa gara Itoophiyaa dhufu akka baay'atu taasisuu dubbatan.
Somaaliyaatti awwaannisa isaan weerare soorachuu eegalan
Miidhaa midhaan fi qabeenya uummamaa biroorratti gahe kan gaafanne Obbo Zabdiwos miidhaa ji'oota Waxabajjii hanga dhuma Sadaasaa uummame irratti qorannoon taasifamee xummuramuu fi kan dhuma ji'a Sadaasaa as jiru ammo qoratamaa akka jiru himan.
Bu'aan qorannoo kanaas qorannoon marsaa lammaffaa amma adeemsifamaa jiru erga xummuramee booda kan ifoomsamu ta'uu nutti himan.
Oromiyaa maal keessatti argamti
Godinaalen naannoo Oromiyaa akka Booranaa fi Baale torbeewwan muraasaa as weerara hoomaa awwaanisaan cimaa miidhaman.
Godinni Booranaa aanaalee 13 qabu keessaa aanaaleen 12 hoomaa awwaanisaa gama Keeniyaa fi naannoo Somaaleetin dhufanin jalaa miidhamaniiru.
"Muka guddaa baala qabu fi lafarratti ammo marga qulqulleessee. Waan magariisaa tokko hin hambisne" jechuun BBCti himan jiraataan aanaa Areero Obbo Huseen Sooraa.
Awwaannisni godinicha kallattii lamaan weerare aanaadhaa aanaatti socho'oon oyruuwwan midhaanii kan akka xaafi, boqoolloo fi boloqqee mancaase.
Hoomaan awwaanisaa kun torbee tokko dura naanno Somaalee irraa gama aanaa Waacilleetin godina Booranaa seenu isaa kan dubbatan Obbo Huseen Sooraa "lafti margaa horsiise bultootaas badii hoomaa awwaanisaa kana jalaa hin baane" jedhan.
Gareewwan miidhaa hoomaa awwaanisaan godina Booranaa irratti qaqqabe qoratan lama hundeessun qorachaa akka jiran kan himan itti gaafatamaan Waajjira Horsiise-bulaa godina Booranaa Obbo Mahaammad Abbaa Qoodaa haala hanga ammaa jirun aanaa Taltallee qofatti midhaan hektaarri 173 hoomaa hawwaanisaan manca'uu isaa BBCti himan.
Aanaaleen godinichaa akka Waacille, Yaabal'oo, Dubuluq, Miyoo, Goomolee, Dilloo, El-Wayyee fi Mooyyalee weerara awwaanisaa kanaan miidhamuu isaanis jiraattotni godinicha BBCn haasofsiise himu.
Weerara hoomaa awwaanisaan barbadaa'un marga loonii horsiise bultoota gidduutti walitti bu'iinsa uumaa jiraachuu kan nutti himan immoo godina Baaletti jiraataa aanaa Raayituti.
Kana malees aanichatti omishaalen midhaanii akka xaafi, boqoolloo fi mishingaa weerara hoomaa awwaanisaan manca'uu isaani himan.
Komii Horsiise Bultootaa…
Tumsa uummatni fi qaamolen mootummaa weerara awwaanisaa faccisuuf taasisanin uummatni maloota aadaatin sagaleewwan garaagaraa dhageesisuu fi aara aarsun akka ofirraa ari'u hojjetamaa turuu jiraattotni godinaalee Baale fi Booranaa BBCn haasofsiise himu.
Haa ta'u malee tumsi kun bu'aa barbaadamu akka hin fidne fi mancaatii margaaf midhaanii akka hin hambisne dubbatu.
"Ministeerri qonnaa xayyaara akka nuf ergu yeroo gaafannu deebi "paayilatiin xayyaaraa lammii biyya Keeniyaa waan ta'ef amma ayyaana qillef boqonnaarra jira" jedhutu nuf laatame" jedhan itti gaafatamaan waajjira horsiise bulaa godina Booranaa Obbo Mahaammad Abbaa Qoodaa.
Kana malees caasaan godinaa hawaasa walin qindoominaan hojjechaa jiraatulle qaamoleen sadarkaa naannoo fi federaalaa jiran keemikaala biifamu dhiyeessurrattis laafina qabu jedhan.
Godinni Booranaa hoomaa awwaanisaan erga weeraramee guyyoota kudhanii ol ta'ulle keemikaalli hanga kaleessaatti godinicha hin geenye.
Ministeera Qonnaatti daaryektarri eegumsa biqilootaa Obbo Zabdewos Saalaato keemikaalli guyyaa kaleessaa godina Booranaa gahuusaa himan.
Xayyaara walin walqabatees hanga iddoon qubannaa xayyaaraa qophaa'utti fi haalawwan biroo mijeessuf turamuusaa himan. Gama hawaasaatiinis biifaan keemikaalaa akka hin adeemsifamne keessattuu godina Baale keessa hanqinni hubannoo akka jiru dubbatan.
"Godina Baale keessaa aanaalee Gooroo fi Gindhir qofatu biifaan kemikaalaa xayyaaraan akka hojjetamu heeyyamamaa ta'an. Aanaalee biroo keessatti mormiin jira. Kanammoo caasaalen mootummaa hawaasa amansiisu qabu" jedhan Obbo Zabdiwos Saalaato.
"Xayyaarri har'a gara godina Baale ni imala" jechuunis himan.
Ogeeyyin sadargaa aanaa jiran idoowwan hoomaan awwaanisaa itti qubate adda baasanii gabaasuu irratti hanqina akka qaban kan dubbatan daayrektarichi "osoo xayyaarri kana dura ergameyyu bu'aa argamsiisu dhiisuu danda'a ture" jedhan.
Guyyaa boruus ogeeyyi aanaalee godina Baale 13 walin magaala Roobetti akka mari'atan Obbo Zabdiwos BBCti himan.Sodaa yeroo dhiyoo…
"Sodaa weerara awwaanisaa guddaa qabna. Tokkoffaa roobni waqtiisaa malee roobaa jiru awwaanisni hanqaaquu buusuuf haala mijataa akka argatu taasisa. Gama biraatin biyyaalee ollaa awwaanisni irraa dhufu keessattis haalli qilleensaa walfakkaataa waan ta'ef weerarri awwaanisaa babal'achuu akka danda'u raagni idil addunyaa agarsiisa" jedhan Obbo Zabdiwos.
Ministeerri Qonnaa hoomaa awwaanisaa qonna arfaasaa fi jallisif sodaa dha jedhe ofirraa ittisuuf hawaasni fi caasaalen mootummaa dhimmichi ilaallatu gamanumaa akka tumsanif gaafachaa jira.
Hojiin fulduratti duulli weerara awwaanisaa ittisuuf taasifamu bajata ministeerri qonnaa qabuu ol waan gaafatuf ministeerri maallaqaa fi qaamoleen biroo bajata yerootti gadhiisun tumsuu qabu jedhan.
Itti gaafatamaan Waajjira Horsiise Bulaa godina Booranaa Obbo Mahaammad Abbaa Qoodaa fi horsiise bultootni godinichaa miidhaa hoomaan awwaanisaa guyyoota darbanitti qaqqabsiisen dabalataan weerarri guyyoota itti aananitti uummamuuf jedhu yaaddoo akka itti ta'e BBCti himaniiru.